အယ်နီညို ဖြစ်စဉ်ကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်အတွက် နိုင်ငံအချို့ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကြေညာ · Global Voices မြန်မာ
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 21 ဇန်နဝါရီ 2016 12:47 GMT
ဤစာပုဒ်​ကို အောက်​ပါ​ ဘာသာ​စကား​များ​တွင်​လည်း ဖတ်​ရှု​နိုင်​ပါ​သည် русский, Español, English
အဆိုပါမြေပုံသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသော နေရာဒေသများကို ဖော်ပြထားသည် (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၅)
© ဓာတ်ပုံ 350org
ဤဆောင်းပါသည် Aaron Packard, Belinda Storey, Matthew Anderson, Jenny Zapata Lopez တို့မှ 350.org အတွက် ဖွဲစည်းတည်ထောင်ထားသော ‘superpage‘ အပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး 350.org မှ စာမူမျှဝေခြင်း သဘောတူညီမှုအရ ကမ္ဘာအသံတွင် ထပ်မံဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 350.orgသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတု လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အဖွဲ့စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်းထန်သော ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေသော အယ်နီညိုခေါ် သဘာဝ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်သည် ယခင်နှစ် မှတ်တမ်းများထက် ပိုမိုကျော်လွန်ကာ လာမည့်လများအတွင်း ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မူများ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မြိုကြီးတစ်မြို့ နှင့် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ ဖြစ်ကြသော ကိုလံဘီယာ၊ အီကွေဒေါ၊ ပီရူး၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဆန်ဒီယာဂိုမြို့တို့တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြောညာလိုက်ကြပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်လည်း နောက်ထက် နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံတွင် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ နောက်လာမည့်လများတွင် အရးပေါ်အခြေအနေဖြင့် ကြုံတွေ့နိုင်သော နေရာဒေသများလည်း များပြားလာဖွယ်ရှိသည်။
“အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နှင့် လူသားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမူများသည် ကျွန်တော်တို့အရင်က မကြုံခဲ့ရဖူးသေးသော အခြေအနေ ပုံစုံမျိုးနဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြပြီး ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အယ်နီညိုက အပူချိန်ကို ပိုပိုပြီး မြင့်တက်လာစေပါတယ်” ဟု ကမ္ဘာမိုးလေဝသအစည်းရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမူး Michel Jarraud က ပြောပါသည်။
ယခုနှစ် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်သည် လူသားတို့၏ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွတ်မူများ စုပြုံမှုဖြင့် ကမ္ဘာကြီးလျင်မြန်စွာ ပူနွေးလာခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသော အဆင့်သို့ စတင် ထိတွေ့လာစေနိုင်သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး စံချိန်ချိုးခဲ့သော အယ်နီညို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကတည်းက ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမူ ၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနက်ပိုင်းသို့ စုတ်ယူသွားခဲ့ပါသည်။ သိုသော် သမုဒ္ဒရာနက်ပိုင်းမှ လေထုအတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော အပူစွမ်းအင် ပမာဏဖြင့် အဆိုပါ အယ်နီညိုသည် ပြောင်းပြန် ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အနည်းဆုံး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ထိရောက်စွာ လျှင်မြန်စေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော ကျွန်တော်တို့သည် ၁၈၈၀ ခုနှစ်များကတည်းက ပူနွေးမှု ၁ ဒီဂရီ ပိုမိုခံစားလာရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အဆက်မပြတ် ရာသီဥတိုပြောင်းလဲခြင်းသည် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်၏ ဖြစ်ပေါ်ကြိမ် နှင့် ဖြစ်ပေါ်မှု ပြင်းအားတို့ကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိလိုပါက ဤစာမျက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သလို အောက်ပါ ဗီဒီယိုကိုလည်း ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
ပါပူဝါး နယူးဂီနီ၊ ကင်ညာ၊ အီသီယီုးပီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ အီကွေဒေါ၊ ပီရူး၊ ဘိုလစ်ဘီးယား နိုင်ငံတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားသည် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကို ခံစားရမည့် ရှေ့တန်းအဆင့်တွင် ရှိနေသည်။
ကာလကြာရှည်စွာ မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ အထက် အစာရေစာရှားပါးမှု
ဂျုလိုင်လမှ စတင်၍ ကလေးငယ်ပေါင်း ၁ သိန်းကျော်သည် ရေ နှင့် အစားစာ မလုံလောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်းများမှ ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။ အဓိက စားသောက်ကုန်သီးနှံများကို ပျက်စီးစေခဲ့သော အချိန်အတော်ကြာ ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းမှုများအပြီးတွင် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးခေါင်မှုကြီးသည် စိုက်ပျိုးသီးနှံသစ်များ၏ ဖွံဖြိုးကြီးထွားခြင်းကို အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အစားသောက်နှင့် ရေရှားပါးသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုများနှင့် ရောဂါဘယများကြောင့် အသေပျောက်များရှိခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာများတွင် ဖော်ပြထားခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာကတော့ မျှော်လင့်ခြင်း တစ်ခုသာ”
“I grew up in Kisii County, the western part of Kenya. A region that contributes largely to Kenya’s fruit basket, but we too have noticed the absence of rainfall. In the 1970’s my family builtadam within the land my grandfather owned. Though he has departed, that dam has always been there from since I can remember, but in the last two years weather patterns across the country have demanded that our family not take this reservoir for granted. As we experience the second round of drying up, the future remains uncertain. Will the dam refill with rain water as we approach the New Year? Our neighbourhood glares at the skies as if to question where the clouds went. All we can do is hope as we wait for the effects of El Nino to pass.”
ကျွန်တော်ဟာ ကင်ညာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ခိစီအီပြည်နယ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကင်ညာရဲ့ စားသောက်ကုန်သီးနှံတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေနေတဲ့ ဒေသကြီးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း မိုးခေါင်နေတာကို သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာ အဘိုးပိုင်မြေနေရာမှာ ဆည်တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဘိုးကွယ်လွန်သွားပေမဲ့လည်း ဒီဆည်ကြီးဟာ ကျွန်တော် မှတ်မိနိုင်တဲ့ အချိန်မှာကတည်းက အမြဲတည်ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကစပြီး နိုင်ငံအနှံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒီဆည်ကြီးကို ပေါ့ပေါ့သေးသေး မတွက်ဖို့ ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ခြောက်သွေ့မှုတွေ တွေ့ကြုံအပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့ရေးဟာ မသေချာ မရေရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောင်နှစ် နှစ်သစ်မှာ ဒီဆည်ကြီးရဲ့ ရေတွေ မိုးရေတွေနဲ့ ပြန်ပြည့်လာမှာလား ….။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကတော့ တိမ်တိုက်တွေ ဘယ်ကို ပျောက်သွားကြတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အတူ မိုးကောင်ကင်ကြီးကို ခပ်စိမ်းစိမ်း ကြည့်လို့နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာကတော့ ဒီအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြီး ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ပြီးဆုံးသွားဖို့ မျှော်လင့်နေရုံပါပဲ။
- အူနယ်ကာ မောင်ဂါ
နှစ်ပေါင်း ၅ဝအတွင်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံးဆက်ရောက်ခဲ့သော မိုးခေါင်ရေရှားမှု။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသည် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးခေါင်မှုကြောင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု ရာသီ ၂ ရာသီ ပျက်စီးခဲ့ရပြီး ဆိုးရွားသော စားနပ်ရိက္ခာ အကျပ်တည်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ အီသီယိုးပီးယား အစိုးရအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်အတွင်းမှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၀.၁ သန်းဟာ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ရပြီး ကလေးငယ်ပေါင်း ၄ သိန်းသည် အဟာရမပြည့်ဝမှုခံစားရမည့် အန္တယ်ရှိသည့် အနေထားမှာရှိသည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။
“ယခုအချိန်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း အဆိုးရွားဆိုးဆုံး မိုးခေါင်မှုဖြစ်ပေါ်နေပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေတုန့်ပြန်မှုအတွက် ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံ ခန့်ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်” ဟု အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်များကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (Save the Children) ဒါရိုက်တာ John Graham က ပြောကြားသွားပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် တွေ့ရသော အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ၊ အဖာ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ဒဘ်တီ အရပ်ဒေသရှိ ကျေးရွာ တစ်ရွာတွင် အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ဇဟာရာ အာလီ (Zahara Ali) နံနက်စာအတွက် ချက်ပြုတ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ ©UNICEF Ethiopia/2015/Bindra )
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ၊ ချန်နိုင်းမြို့
အယ်နီညို ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု့သည် စံချိန်တင်ရေကြီးရေလျှံ မှု့များကို ပိုမိုပြင်းထန်စေခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချန်နိုင်းမြို့တွင် ၅ ပတ်ခန့်ကြာ ရွာသွန်းခဲ့သော ပြင်းထန်သည့် မိုသည်းထန်မှုများ ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေကြီးရေလျှံမှုများသည် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ချန်နိုင်းမြို့ စံချိန်တင် မိုးရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် လေဆိပ်တွင် လေယာဉ်များ ရပ်ဆိုင်းထားရခြင်း၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီး ပျက်တောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ချန်နိုင်း ရေးကြီးရေလျှံမှုများ။ ဓာတ်ပုံ Destination8infinity via Wikimedia. CC BY-SA 4.0
အီကွေဒေါ၊ ပီရူး နှင့် ဘိုလစ်ဘီဘီးယား နိုင်ငံ
ပြင်းထန်သော ရေကြီးရေလျှံမှုများ နှင့် ရေတိုက်စားခြင်းများအတွက် သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း။
လာမည့်လများအတွင်း အီကွေဒေါ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းတွင်ပင် လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၁.၅ သန်းခန့်ဟာ ရေကြီးရေလျှံမှု့ အတွက် အန္တရာယ် ရှိသည့် အခြေအနေတွင်ရှိသည်ဟု ခန်မှန်းရပါသည်။ ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ် အတောအတွင်း အီကွေဒေါနိုင်ငံ နှင့် ပီရူးနိုင်ငံ တို့တွင် ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုထက် ၁၀ဆ ပိုမို ပြင်းထန်သော မိုးရွာသွန်းမှု ခံစားခဲ့ရပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ၊ ရွှံနွံများပြိုဆင်းလာခြင်းများ နှင့် အခြေခံ အဆောက်အုံများ ပျက်စီးခြင်း စသည်တို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည် ကုန်ကျမှုများ နှင့် အသက်ဆုံးရုံးမှုများကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ နှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (World Food Programme) ၏ စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကို မဖြစ်ပွားမှီ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရန် တုံပြန်ခြင်း လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်းထက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထက်ဝက်အားဖြင့် သက်သာစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ များစွာသော လူမှုအဖွဲ့စည်းများသည် ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကို အမှတ်ရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်လများတွင် အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ USAID ၏ ဓာတ်ပုံအရ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကွဲပြားစွာခံစားကြရသည်။ (ဖော်ပြပါမြေပုံသည် ၁၉၉၇-၉၈ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော ကုန်ကျစရိတ်ငွေကို ဖော်ပြထားသည်။)
ဤမြေပုံသည် သမိုင်းအထောက်ထားများအရ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မူ့များကို ပျဉ်းမျှ ဖော်ညွန်းထားသည်။ ၄င်းသည် လတ်တလောတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နှစ်ခု ကြောင့် ဆုံရှုးမှုများကို လည်းဖော်ပြသည်။ (© ဓာတ်ပုံ USAID/OFDA)